ရုပ်ရှင် – Media9
ဂီတ ဆယ်လီ ဖက်ရှင် ဗြီဒီယို ရုပ်ရှင် အနုပညာ အမေးအဖြေ
ဗြီဒီယို ရုပ်ရှင် အနုပညာ
1014 Movie Trailer…
[Unicode] ဒါရိုက်တာကျော်သူရိုက်ကူးထားသည် ဝရဇိန် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး၏ ပွဲဦးထွက် 1014 ရုပ်ရှင်ကို 19.12.2019 ခုနှစ်တွင် ရုံတင်ပြသတော့မည် [Zawgyi] ဒါ႐ိုက္တာေက်ာ္သူ႐ုိက္ကူးထားသည္ ၀ရဇိန္ ႐ုပ္႐ွင္ထုတ္လုပ္ေရး၏ ပြဲဦးထြက္ 1014 ႐ုပ္႐ွင္ကို 19.12.2019 ခုႏွစ္တြင္ ႐ံုတင္ျပသေတာ့မည္
အပျိုကြီး စာရေးဆရာမနေရာကသရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ဝါဝါအောင်…
[Unicode] ရည်းစားတစ်ခုလပ်ဆိုတာ အန်တီဝါအထင် ရည်းစားတွေက ခဏတဖြုတ်ကွဲကြတာပါ တစ်ခုလပ်ဖြစ်ပြီး နောက်ကျရင်ပြန်ပေါင်းကြတာပါ [Zawgyi] ရည္းစားတစ္ခုလပ္ဆုိတာ အန္တီ၀ါအထင္ ရည္းစားေတြက ခဏတျဖဳတ္ကြဲၾကတာပါ တစ္ခုလပ္ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္က်ရင္ျပန္ေပါင္းၾကတာပါ
အပျိုကြီးမမ အဖြစ်သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ မြတ်သူသူ
[Unicode] “ပဲလည်းများတယ် မြတ်သူက မိန်းမ မဆန်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့ လေသံကြီးတွေက မာမာတောင့်တောင့်ကြီးတွေနဲ့ အတင်းတွေချွဲနွှဲပြောနေတာဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တော့ ရယ်စရာကောင်းတယ်ထင်တယ်” [Zawgyi] “ပဲလည္းမ်ားတယ္ ျမတ္သူက မိန္းမ မဆန္ေတာ့ပိုဆုိးတာေပါ့ ေလသံႀကီးေတြက မာမာေတာင့္ေတာင့္ႀကီးေတြနဲ႕ အတင္းေတြခၽြဲႏႊဲေျပာေနတာဆိုေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေတာ့ ရယ္စရာေကာင္းတယ္ထင္တယ္”
[Unicode] သူကဘယ်လောက်ပဲစကားပြောတာ အပေါက်ဆိုးဆိုး၊အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ပြောပြော အန်တီဝါအပေါ်ကောင်းတယ်…. [Zawgyi] သူကဘယ္ေလာက္ပဲစကားေျပာတာ အေပါက္ဆိုးဆိုး၊ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ေျပာေျပာ အန္တီဝါအေပၚေကာင္းတယ္….
စာပေ ဗြီဒီယို ရုပ်ရှင် အနုပညာ အမေးအဖြေ
Single ဖြစ်ချင်ရင်လည်းဖြစ်မယ် ရည်းစားရချင်ရင်လည်း ရသွားမယ်ဆိုတဲ့ ယုသန္တာတင်
[Unicode] 2019ထိတော့သေချာတယ် 2020ကအဝေးကြီးလိုသေးတယ်လေ အဲ့ကြားထဲမှာ ကိုယ်ကSingle ဖြစ်ချင်ရင်လည်းဖြစ်မယ် ရည်းစားရချင်ရင်လည်း ရသွားမယ်ဆိုတဲ့ ယုသန္တာတင် [Zawgyi] 2019ထိေတာ့ေသခ်ာတယ္ 2020ကအေ၀းႀကီးလုိေသးတယ္ေလ အဲ့ၾကားထဲမွာ ကိုယ္ကSingle ျဖစ္ခ်င္ရင္လည္းျဖစ္မယ္ ရည္းစားရခ်င္ရင္လည္း ရသြားမယ္ဆုိတဲ့ ယုသႏၱာတင္